एयरपोर्ट अध्यागमनको नयाँ नियम – अब विदेशबाट फर्किदा यी सामानमा ल्याउदा भन्सार लाग्ने ! - Thulo khabar
एयरपोर्ट अध्यागमनको नयाँ नियम – अब विदेशबाट फर्किदा यी सामानमा ल्याउदा भन्सार लाग्ने !
काठमाडौं : विदेशबाट घर फर्कँदै हुनुहुन्छ भने यो जानकारी तपाइको लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । तपाईले विदेशबाट ल्याउने कतिपय सामानमा भन्सार शुल्क लाग्दैन । को’रोना संक्र’मण पछि हाल नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सबै उडान खुल्ला गरिसकेको छ ।
विदेशबाट फर्किनेले खासगरी मोबाइल, टिभी तथा अन्य विद्युतीय सामान, गरगहना र मदिरा ल्याउँदा निकै विचार पु¥र्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता सामानहरु नेपालीहरुले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कंदा बढी ल्याउने सामानमा गनिन्छ त्यसैले पनि भन्सारमा यस्ता कुराहरुमा बढी ध्यान दिइन्छ । कतिपय सामानहरु ल्याउदा तोकिएको भन्सार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय सामानहरु सिधै जफत पनि हुनसक्छ ।
नेपालमा स्थानीय बसोबास गर्ने नागरिकले विदेशमा गई फर्कँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा पूर्ण भन्सार छुट हुन्छ । जसमा लुगाफाटा, बरबि’छ्यौनादेखि गृहस्थीका पुराना सामान र औषधि उपचार गराई नेपाल फर्केका विरामीले ल्याउने औषधिमा कुनै भन्सार कर नलाग्ने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै आफुले प्रयोग गरेको मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा जस्ता सामानहरुमा पनि कुनै कर लाग्दैन ।
त्यस्तै विदेसिएकाले घडी, स्टिल क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर मोवाइल फोन, पेन ड्राइभ, ट्याबलेट वा ल्यापटप वा कम्प्युटर, टेलिभिजन, म्युजिक सिस्टम, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, पंखा, रेडियो एक–एक सेटसम्म ल्याउन पाइनेछ ।
त्यस्तै एक लिटरसम्मको मदिरा बोत्तलमा भन्सार शुल्क लाग्दैन । त्योभन्दा बढी परिमाण ल्याए जफत हुन सक्छ । त्यस्तै पेशागत यात्रुले प्रयोग गरी ल्याएको सामान्य प्रकारका सामानहरु एक–एक थानमा पूर्ण भन्सार छुट हुन्छ । डाक्टरका लागि ब्लड प्रेसर नाप्ने सामान्य यन्त्र, स्टेथे’स्कोप, खेलाडीको खेलकुद सम्बन्धी सामान फुटबल, भलिबल, ब्याटमिन्टन सेट, गवैयाको सामान्य बाजा जस्तै– गितार, हार्मोनियम, तबला, जस्ता सामानहरु पनि पूर्ण भन्सार छुटमा ल्याउन सकिन्छ । त्यस्तै विदेशबाट फर्किएकाहरुले शरीरमा लगाउने लुगाफाटा, जुत्ता, कस्मेटिक लगायतका सामान पन्ध्र थान, घरायसी प्रयोगका सामान्य किसिममा उपकरण मिक्सर, जुसर, सिलाई मेसिन, ग्यास टेबुल इस्त्री (आइरन), राइसकुकर लगायतका दुई थान सामानमा पूर्ण भन्सार छुट हुनेछ । उल्लेखित सामान बाहेक नितान्त घर व्यवहारमा आवश्यक पर्ने सामान बढीमा दुई–दुई थान सम्ममा महसुल पूर्ण छुट हुनेछ।
कार्यालयका अनुसार यी सामानमा यात्रुको अवस्था, परिवार संख्या, बसेको मुलुक र समयावधि समेतलाई ध्यानमा राखेर भन्सार कार्यालयका प्रमुखले औचि’त्य हेरी स्वीकृति पनि दिन सक्ने छन् । त्यस्तै मलेसिया तथा खाडी मुलुकको हकमा एक वर्ष भन्दा बढी काम गरी नेपाल फर्केका कामदारलाई भने ३२ इन्च भन्दा कम इन्चको एलइडीमा भन्सार महसुल नलाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। यो नियम नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृत लिएर गएका कामदारको हकमा मात्र लागू हुने छ। विदेश गएको समय र आउँदाको समय हेरेर अवधि मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ।
१) १ ग्राम देखी ५० ग्रामसम्म काँचो सुन लिएर आउँदा प्रति १० ग्रामको कर = ५२०० रुपैयाँ । उदाहरण:- मानौं तपाइले १० ग्राम काँचो सुन ल्याउनुभएको छ भने १x५२००= ५२०० रुपैयाँ, त्यस्तै तपाइले ४० ग्राम काँचो सुन ल्याउनुभएको छ भने ४x५२००= २०,८००/- रुपैयाँ लाग्छ । २) ५० ग्राम देखी १०० ग्राम सम्मको काँचो सुन लिएर जाँदा प्रति १० ग्रामको ६२०० रुपैयाँ ।